Afarta kulan ee ugu fiican beeraha ee loogu talagalay Android | Androidsis
Ciyaaraha beeraha waa nooc ka mid ah kuwa helay sumcad badan sanadihii la soo dhaafay. Qayb ka mid ah magacan waxay ku leeyihiin Facebook, maaddaama shabakadda bulshada aan ka helno ciyaar mowduucan ah. Ciyaar u suurtagashay in ay ku xirmaan malaayiin isticmaale adduunka oo dhan. Intaa waxaa dheer, hubaal in ka badan hal ayaa xusuusta casuumaadaha dhibka badan.
Laakiin, noocani wuxuu ka tagay shabakadda bulshada gadaal. Hadda, waan heli karnaa ciyaaro badan oo beeraha ah oo loo heli karo Android. Kaliya socod ku dhex mar dukaanka ciyaarta si aad u aragto. Sidaa darteed, waxaannu kaaga tagi doonnaa hoosta a xulashada kuwa ugu fiican Maxaan ka heli karnaa.
Sidan oo kale, dhammaan kuwa xiiseynaya nooca ciyaarta, raadinta ayaa aad uga fudud. Mar dambe uma baahnid inaad raadiso dhammaan cayaaraha beeraha ee loo heli karo Android. Kuwani waa ciyaaraha u qalma boos ka mid ah liiskan:
1 FarmVille 2: Bixitaanka Reer Miyiga
2 Beerta Jannada
3 Maalinta Hay!
4 Nolosha Beerta Badda
FarmVille 2: Bixitaanka Reer Miyiga
Waxaan ku bilaabaynaa liiska mid ka mid ah cinwaanada ugu caansan, laga yaabee kan ugu caansan xitaa. Sida xaqiiqada ah intiina badani waad ogtahay kulankaan. Isla taas waan awoodi doonnaa Kordhi xayawaanka, diyaari cuntada, raadi walxaha gaarka ah iyo hawlo kale. Intaa waxaa dheer, waxaan haysannaa suurtagalnimada abuuritaanka iskaashato ka ganacsata dhammaan cuntada. Waxay la noqon kartaa asxaabta iyo deriska.
Waxay kaloo na siineysaa awood aan ku soo gurno dalagyada oo aan u habeyn karno beerta markasta. Suurtagalnimada ciyaarta ugu caansan uguna muhiimsan ee nooca. The kala soo bax ciyaarta for Android Waa lacag la’aan. In kasta oo aan wax ka iibsanno gudaha.
Ciyaartan waxaan u guurnay janno kuleyl ah halka uu ku yaalo beerteenu. Markaa waa ciyaar beer gaar ah. Beerteenna ka sokow, sidoo kale waxaan leenahay jasiirad dhan anaga. Laakiin tan jasiiradda sidoo kale waxaa ka buuxa waxyaalo qarsoon. Wax ka dhigaya ciyaarta xoogaa madadaalo ah oo aan waxbadan laga waydiin nooca.
Sidoo kale, wuxuu ina siinayaa ikhtiyaarka aan ku rabbeyn karno xayawaanka duurjoogta ah sida libaaxyada, Geriga ama baandooyinka. Waxaan sidoo kale ka abuuri karnaa dalxiis u gaar ah jasiiraddan. The degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. In kastoo, gudaha aan ka helno wax iibsasho.
Beerta Jannada: Ciyaarta Jasiiradda ee gabdhaha iyo wiilasha
Developer: foranj - cayaaraha maalinta beeraha & hoteellada degsiimada jannada
Mid kale oo ka mid ah cinwaannada ugu caansan ciyaaraha beeraha dhexdooda. Waa ciyaar caan ku ah Android. Markan waa inaanu daryeelnaa beerta, iyo sidoo kale inaan ganacsi la samayno asxaabta iyo deriska. Waa inaan si gaar ah ugu fiirso dalagyada iyo xayawaanka. Ciyaarta ayaa ina siinaysa ikhtiyaari ah in loo habeeyo beerta oo weliba waan sii ballaadhin karnaa.
Waxaas oo dhan waxaa ugu weyn, waxaan leenahay waab u gaar ah oo aan ku iibin karno kuna iibsan karno dalagyada ciyaartoy kale. Si aad u sii sii wadato, ciyaarta ayaa na siinaysa ikhtiyaarka aan u leenahay dhisno magaaladeena oo aan qaabilno martida. Haddii aad tahay qof raacsan noocyadan iyo ciyaaraha jilitaanka, waa ikhtiyaarka ugu fiican ee la tixgeliyo. Ku soo degsashada ciyaarta loogu talagalay Android waa bilaash, inkasta oo ay jiraan wax iibsasho gudaha ah.
Nolosha Beerta Badda
Waxaan ku xirnay liiska kulankaan. Waa suurtagal inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu yar ee lagu yaqaan cayaaraha beeraha. Markan waa inaan la tartano asxaabta iyo deriska si aan u aragno cida ugu fiican beeralayda. Waxaan ku leenahay howlo badan beerta. Waxaa ka mid ah daryeelka dalagyada iyo xoolaha iyo iibinta dalagyada si macaash loo helo. Naqshadeynta ciyaarta Waa mid ka mid ah dhinacyada ugu badan ee taagan, maadaama ay ka duwan tahay.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo, sidii kiisaskii hore, aan wax uga iibsanno gudaha.
Developer: Ciyaaraha Qarniga Pte. Ltd.
Kuwani waa afar ciyaar oo beeraha ugu fiican oo aan hadda ka heli karno Android. Waxaan rajeyneynaa in xulitaankan uu ahaa mid adiga xiiso kuu leh oo aadan ka waaban inaad kala soo baxdo waxyaabaha aad ugu jeceshahay mobilkaaga. Maxaad u maleyneysaa xulashada ciyaartan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha beeraha ee ugu wanaagsan Android
Iyo Dooxada Stardew?
Ku jawaab Anonymus
Tirooyinka rasmiga ah ee Facebook ee 2017